Kuthetha ukuthini ukuphupha ulwandle? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Ngaba ujonge ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha ulwandle?
2 Intsingiselo yokuphupha ngolwandle
3 Ngaba waphupha ukuba ujonge ulwandle kwaye wabona inqanawa mgama?
4 Ngaba uphuphe ukuba ulwandle lungcolile?
5 Ngaba uphuphe ukuba ulwandle alunanto okanye luzele ngabantu?
6 Ngaba uphuphe ukuba ubaleka elwandle?
7 Ngaba waphupha ukuba uyonwabele elwandle?
Ngaba ujonge ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha ulwandle?
Kuya kufuneka ndikuxelele ukuba ufike kwiphepha elilungileyo, kweli nqaku ungabona eyona ntsingiselo kunye nokutolikwa kweli phupha liqhelekileyo.
Ngaba ikhona into enokusinika imvakalelo yenkululeko emphefumlweni enkulu ngakumbi kunaselwandle? Unxweme yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphola kubushushu, ukonwabela ubuhle bendalo kunye nokudibana nabantu abatsha. Kodwa kunokuthetha ntoni ukuphupha ulwandle?
Intsingiselo yokuphupha ngolwandle
Ngokubanzi, xa siphupha elunxwemeni, siphela sibonisa umnqweno omkhulu wokuphumla, nokuba yingqondo, umzimba okanye nomoya! Nangona kunjalo, ukutolikwa okunesidima kuyafuneka:
Ukongeza ekubonakaliseni umnqweno wokuphumla emzimbeni, engqondweni nasemphefumlweni, xa siphupha sibona ulwandle lukude kuphela, oko kuthetha ukuba sineenjongo ebomini, kodwa sisekude ekufezekiseni.
Zama ukukhumbula ezinye iinkcukacha zelo phupha. Impendulo yokusondela kwiinjongo ezikude ngoku inokuboniswa kumbono wolwandle.
Ngaba waphupha ukuba ujonge ulwandle kwaye wabona inqanawa mgama?
Olu luseto lweklasikhi yokuphumla, njengoko ingoma eyaziwayo ye-MPB sele isitsho. Kule meko, ke xa siphupha kuphela ulwandle olukude, sikude nakwiinjongo zethu, nangona kunjalo isikhephe esinye nangaphezulu ngasemva sibonisa ukuba isisombululo sokufikelela kwiinjongo zethu siphantsi kwempumlo kwaye ukuba senza ntoni ukungathathi amanyathelo ngokukhawuleza singaphulukana nelo thuba lokuziphumeza.
Zama ukuhlalutya ubomi bakho ngokuzolileyo, njengoko unokufumana iimpendulo kwiindawo ezilula kunokuba ucinga.
Ngaba uphuphe ukuba ulwandle lungcolile?
Ukuphupha ulwandle, njengoko sibonile, kubonisa umnqweno wokuphumla okanye iinjongo zethu ebomini! Kodwa kule meko, ukuba ulwandle belumdaka oko kuthetha ukuba ngaphandle kweenjongo ezikude, mininzi imiqobo kunye nemiceli mngeni ezayo.
Cinga, camngca kwaye uzame ukufumana ezona zisombululo zibalaseleyo ngokuthe ngqo entliziyweni yakho.
Ngaba uphuphe ukuba ulwandle alunanto okanye luzele ngabantu?
Kule meko, ukutolikwa kuya kuxhomekeka kwiimpawu zomphuphi, oko kukuthi, ukuba uthanda kwaye onwabele uchulumanco lolwandle olunabantu abaninzi ukuphupha enye kuthetha ukuba ukuphumla okanye ukuphumla kuseza kuza: iiholide, isimemo kuhambo amaqela, njl. Nangona kunjalo, ukuba uluthiyile ulwandle oluxineneyo kwaye uphuphe ngalo, ikhefu lisekude.
Kuyafana nakulwandle olungenanto, kuxhomekeke kunambitheka komphuphi.
Ngaba uphuphe ukuba ubaleka elwandle?
Lo ngumnqweno wakho ongaqondakaliyo wokuphumla, uxolo, ukuthula. Ngamanye amaxesha ukuphumla iingqondo zethu kwiingalo zomntu othandekayo nako kunokutolika.
Ngaba waphupha ukuba uyonwabele elwandle?
Ukuba uphuphe uhleli esihlalweni ujonge elunxwemeni, okanye ngaselwandle uziphumze kwaye wonwabile, oko kuthetha ukuba uxolo kunye nokufezekiswa kweenjongo zakho kuya kwenzeka kungekudala.